रोकाओको गाउँमा के गर्ने यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, España
यदि तपाईं यस गर्मीमा के गर्ने बारे सोचिरहनुभएको छ भने, राम्रो विचार भनेको बाहिर हिंड्नको लागि जानुहोस्। सुरम्य गाउँ र शहरहरू। ती मध्ये एक हो Andalusia र यो धेरै लोकप्रिय छ। म बोल्छु शीत, एउटा रमाईलो र रमाईलो गन्तव्य जुन तपाईंको लागि पर्खिरहेको छ।
शीत Almonte मा छ, Huelva को बारे मा 55 किलोमिटर, र शहरहरु को भित्र तीर्थयात्रा राम्रो आफ्नै लागि चिनिन्छ। यो एक घटना हो कि पर्यटकहरु लाई आकर्षित र यसको एक प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण। यसलाई थाहा पाऔं!
El Rocío को समुदाय मा छ Andalusiaस्पेनमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएकोले eight० लाख भन्दा बढी बासिन्दाहरू पनि देशको दोस्रो ठूलो स्थानमा छन्। यसको राजधानी Seville र Huelva हो, ठीक, १०० किलोमिटर मुनि। Huelva बाट, एल रोसियो 55 XNUMX किलोमिटर टाढा छ त्यसोभए यदि तपाइँ सेभिलमा हुनुहुन्छ भने तपाइँले गर्न सक्नुहुन्छ दिन यात्रा.
एउटै समयमा एल रोसियो Matalascañas बाट १ 15 किलोमिटर मात्र पर छ, अर्को शहर जुन केहि समयको लागि पर्यटक केन्द्र भएको छ र त्यो डोआना राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमा अवस्थित छ। एल रोसियो यस राष्ट्रिय निकटको सडकमा पुगेको छ, त्यसैले यो सडकबाट अप्ठ्यारो दृश्यहरू छन्।
एल रोसियो एक हो सेतो घरहरूको सानो शहर। तपाईंको मुटु छ भर्जिन डेल रोकोको हर्मेटेज, एक कुमारी जो नाम बाट जान्छ ब्लान्का पालोमा र यो धेरै भक्तहरू छ कि। वास्तवमा, ती सबै एक बर्षमा एक पटक प्रख्यात शहरमा भेला हुन्छन् रोकाओको तीर्थयात्रा उहाँलाई भक्ति तिर्न। मिति पेन्टेकोस्ट सोमबारको सप्ताहन्तमा पर्दछ र यो एक लोकप्रिय लोकप्रिय धार्मिक बिदा हो।
जुलूस गाडीमा पैदल, घोडामा सवार हुँदै र तीर्थयात्रामा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै हर्मिटेजमा जान्छ जहाँ यो आइतवारदेखि सोमबार रात बिताउँछ, प्रख्यात "फेंसको जम्प"। त्यसपछि कुमारी, ह्वाइट डोव, उनको स्थायी शरण छोडिन्छ र गाउँ भर भक्तहरूको काँधमा जुलूसमा बाहिर जान्छ। यद्यपि शहर बरु सानो छ यो तीर्थयात्रा एक सबैभन्दा लोकप्रिय हो र सम्पूर्ण स्पेनका अधिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
अब, यदि तपाईं केवल तीर्थयात्राका लागि जानुहुन्न भने, एल रोसियोको गाउँमा तपाई अरू के गर्न सक्नुहुन्छ? खैर हर्मेटेज तपाई सँधै यो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, अवश्य। यो कोटिजो जस्तै स्टाईलमा अन्डालुसियन हो र यसमा शीर्षमा विशाल फलामको क्रस छ। भित्र, ऊ ईर्ष्यालु हिसाबले ए बारोक वेदपीस भर्जिनको छविको साथ, सबै Andalusia को बदलेको संरक्षक।
यो १ XNUMX औं शताब्दीमा नक्काशी गरिएको छ जुन गोथिक शैलीको छ र चार शताब्दी पछि परिवर्तन भयो। त्यसपछि तिनीहरूले उनलाई विलासी कपडाहरूमा लगाइदिए, मानौं त्यो अष्ट्रियाको अदालतको भाग हो: एक फीता लुगा, घण्टी आकारको स्कर्ट, र कडा आस्तीन। यो भित्र जाँदा र यसलाई नजिकै हेर्दा मूल्यवान छ।
यस बीच हर्मिटेजको वरिपरि तपाईं सक्नुहुन्छ Paseo Marismeño हिंड्नुहोस् (मन्दिरको अगाडि, साँच्चै), वा यो पनि Acebuchal स्क्वायर यसको शताब्दी, विशाल र सुन्दर जैतुन रूखको साथ।
रोक्सियो प्रवेश गर्नु अघि हो Ajolí ब्रिज वा किंग्स ब्रिज जुन तीर्थयात्राहरूको बखत सिम्पिकाडोस बित्छ। उही पुलको सडकमा तपाईंले रोसेरास ब्रदरहुड्स, तीर्थयात्रामा भाग लिने शहर र छिमेकी शहरहरूको पुरानो समूह र ऐतिहासिक रूपमा ती भर्जिनप्रति भक्ति फैलाउने काममा रहेको पुराना समूहहरूको नाम सम्झने प्लेकहरू देख्नुहुनेछ।
अर्कोतिर गाउँ आफै नै धेरै रमणीय छ र हिड्नु अनिवार्य छ। साना घरहरू साना र सेता हुन् सडकहरुमा अल्बेरो छ, त्यो भूमि जसले बुलिrings्गको बुल्लि .हरू पनि समेट्छ। धेरै घरहरू रेष्टुरेन्टहरू वा साना पसलहरूको रूपमा कार्य गर्दछन् जहाँ तपाईं स्मृति चिन्हहरू किन्न सक्नुहुनेछ जस्तै साधारण जिप्सी पोशाक वा केही धार्मिक छवि।
र अन्तमा, गाउँ वरिपरिको परिदृश्यहरु साँच्चै सुन्दर छन् त्यसैले तिनीहरू बाहिरी गतिविधिहरू जस्तै आदर्श हुन् पैदल यात्रा वा घोडा सवारी। वास्तबमा, इक्वेस्ट्रियन गतिविधिहरू दिन को क्रम हो र एल रोसियो को पनि शीर्षक हो अन्तर्राष्ट्रिय घोडा गाउँ त्यसोभए त्यस क्षेत्रमा यस जनावर कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईले एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले वर्षभरि घोडा, घोडा र फोल्स चरिरहेका देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं तीर्थयात्रामा जानुहुन्छ भने तपाईंले धेरैलाई देख्नुहुनेछ, र यदि तपाईं जून २ 26 मा जानुहुन्छ, जुन परम्परागत घटना भनेर चिनिन्छ "Saca de mares"।
र निस्सन्देह, एल रोसियोसँग यसको छेउमा लाजमर्दो छ डोहाना राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसैले यो पाइन जंगलहरू, धेरै क्षेत्रीय वनस्पतिहरू र तीर्थयात्राको दौरान ब्रदरहुडहरूले अनुसरण गर्ने परम्परागत मार्गहरू.
वास्तवमा त्यहाँ त्यहाँ चार मार्गहरू छन् जुन त्यस पार्टीमा बनेका हुन्: एउटा हो सेभिलियन तरीका, जुन एक ब्रदरहुड्स द्वारा प्रयोग गरिएको हो जुन विश्व र स्पेनको बाँकीबाट आउँदछ, अर्को हो Sanlúcar रोडजुन डोआना राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पार गर्दछ, त्यहाँ पनि छ Moguer रोड Huelva बाट अन्तमा र अन्तमा मैदानी ठाउँ Almonte बाट आउँदै।
सच्चाइ यो हो शीत यो एक शताब्दी पुरानो इतिहास छ, धेरै परिवर्तन, र आज यो एक सानो शहर अब बिरलै एक अद्भुत प्रकृति को बीचमा परिचित छ। आज एक छ धार्मिक पर्यटन गन्तव्य, तीर्थयात्रामा, तर पनि सप्ताहन्त क्लासिक वर्षको बाँकी शताब्दीयौंको बावजूद यसले यसका केही सुरुवाती सुविधाहरू जस्तै साना घरहरू, बलौटे सडकहरू वा खुला वर्गहरू) जोगाउन व्यवस्थित गरेको छ, तर आज यसमा रेष्टुरेन्टहरू र होटलहरू पनि छन् ... र हो, धेरै आगन्तुकहरू पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » रोकाओको गाउँमा के गर्ने